samedi, 08 juin 2019 13:09
Colbert: Fiaraha miasa teo amin'ny GFEM sy ny Jejoo
Notanterahina tao amin'ny Hôtel Colbert ny fanaovan-tsonia fifanarahana fiara-miasa teo amin'ny Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar, GFEM sy ny gazety Jejoo omaly 07 jona 2019. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 06 juin 2019 18:06
Ambatoboeny: Nankalaza ny Idd ul FITR
Nanatanteraka ny fivavahana ny Idd ul fitr tao amin'ny Stade Razafintsalama Gabriel ny fikambanan'ny Djamat Sounite eto Ambatoboeny omaly 05 jona 2019. Avy eo dia nanao cortège namakivaky ny tanàna. Ny harivan'io dia nisy lalao baolina kitra sy lalao maro samihafa izay natao tao amin'ny Stade Razafintsalama, mba ho marika ny hafaliana satria izany no tanjona. Taorian'izay dia nisy ny fiarahana niombona sakafo ka brochette party no nanamarihana izany, teo akaikin'ny biraon'ny tsena. Nisaotra ny Communauté Musulmane Sunnite Ambatoboeny (CMSM) ny rehetra tamin'izany fikarakarana izany. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 06 juin 2019 16:00
Lapan'Andafiavaratra: Fiofanana karakarain'ny RE ORG
Notanterahina tety amin'ny lapan'Andafiavaratra ny fampahafantarana ny fisian'ny fiofanana, izay karakarain'ny RE ORG, ka mpiofana miisa 26 izay mpikambana ao amin'ny ICOM, misahana ny mozea, erak'i Madagasikara no hisitraka izany fiofanana izany, izay hatao ny 11 ka hatramin'ny 24 jona ho avy izao. Marihina fa ny masoivohon'ny Japon no hamatsy vola ho entina hanaovana izany fiofanana izany. Amin'ny volana novambra izao no misokatra ho an'ny daholo be ny lapan'Andafiavaratra. (Jereo Sary Tohiny)
Tonga nanatrika ny lanonam-pamaranana ny volana Ramadany na ny «Aïd Moubarak» teny amin'ny Mosquée 67ha - Antananarivo ny Filohan'ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao omaly alarobia 5 jona 2019. Lanonana izay niarahana tamin'ireo olo-manankaja maro ao amin'ny fikambanan'ny mpino silamo eto Madagasikara izay notarihan'ny Chek Mohamad Filohan'ny fikambanana sy Papa Soulé Filohan'ny fikambanan'ny Zanaka Avaratra. Niarahaba ny mpino silamo rehetra nahavita ny fifehezan-tena sy ny fifadiana izay zava-dehibe tokoa ho azy ireo i Chek Mohamad satria fandresena lehibe izany. Nisaotra sy nirary soa ny Filohan'ny Antenimieran-doholona amin'ny fanohanany ny antso sy ny fiarahany amin'ny "Communauté Musulmane" hatramin’izay ihany koa na dia teo aza ny tsy fitoviam-pinoana.
mercredi, 05 juin 2019 12:58
Ambatoboeny: Mankalaza ny Ide ul FILTR
de ul fitr masdjid dawattol Islam Ambatoboeny (sunnit kumbar jamat) Ampitsikina no nanokafana ny ramadan teto Ambatoboeny, ary ampiravona ihany koa no nentina nanakatonana azy tamin'ny fanaovana ide ul FILTR. Maro sy feno ny mosquée teto an-toerana satria fotoana lehibe ny andro anio faha 05 jona 2019. Ny Masdjid dawattol Islam eto Ambatoboeny dia faly miarahaba feno hoan'ny mpino rehetra tratran'ny IDE androany. (Jereo Sary Tohiny)
Sary fanehoana nindramina
Andro lehibe ho an'ny fianakaviam-ben’ny Seminera Zandriny Ampahateza-Ambohipo sy ny Diosezy Antananarivo ity Alahady 2 jona ity. Fetim-bokatra ao an-toerana anio handraisana ireo tolotra avy amin’ny Kristianina, ny fianakaviana, ny faritra, ny isam-paroasy, ny fileovana, ny distrika, ny fikambanan-drelijiozy, ny sekoly katolika, ny fikambanana masina, ny vaomieran’asa, ny hery velona rehetra mandrafitra ny Fiangonana, hanampiana sy hanohanana feno ny taninketsan’ny fiantsoan’Andriamanitra ho pretra. Misy ny Sorona Masina tarihin’ny Arseveka, Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona. Aorian'ny izay ny lalao samihafa, arahin'ny sakafom-pianakaviana ary hira gasy ataon’ny seminarista no hanakatona ny andro anio.
samedi, 01 juin 2019 13:23
Mahamasina: FJKM - Hetsika fitoriana Filazantsara faha-5
Nanatanteraka ny hetsika fitoriana Filazantsara faha-5 ny teo anivon'ny FJKM foibe, izay natao tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Maro ireo hetsika tety an-toerana toy ny fitiliana sy fitsaboana maimaim-poana, fanomezana rà, ny fijerena ny tosi-drà, fivarotana boky aram-pilazan-tsara, Fitoriana Filazantsara, fitoriana an-kira, fanatanjahan-tena. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 25 mai 2019 21:56
RyKala Vazo: Nodimandry androany i Mitchou
Fahatsentseman'ny lalandra no nidirany hopitaly ny 20 mey 2019. Teo ampanomanana ny handefasana azy hotsaboina any ivelany no izao nindaosin'ny fahafatesana izao i Mitchou, tao amin'ny HJRA Ampefiloha, na nanao ny ala nenina rehetra aza ny mpitsabo. Andriambolatiana Miarintsoa ny anarany feno, Mitchou no fiantson'ny namany sy ny fianakaviana azy. Mbola mpitovo. Mpikambana mpamorona ny tarika RyKala Vazo i Mitchou. Mpamorona sady mpihira, mpively aponga, mpitendry gitara beso tao amin'ny tarika izy. Eo ampanomanana seho sehatra maro ny tarika no izao tojo fahabangana izao noho ny fahafatesan'i Mitchou. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 23 mai 2019 10:48
Nodimandry i Patrick Alès, mpamorona ny « brushing »
Teo amin’ny faha-88 taonany i Patrick Alès, izao nodimandry izao tany Frantsa. Izy no mpamorona ilay fitaovana fanamainana sy fikarakarana volo haka endrika amin’izay itiavana azy vonjimaika na « brushing ». Olo-malaza maro no efa nandalo teo aminy nikarakara volo toa an’i Catherine Deneuve sy ry Jackie Kennedy. Nikaroka ary nisehatra tamin’ny famoahana vokatra fikojana endrika amam-bika, ihany koa izy. Zanaka mpifindra monina avy any Espaina i Patrick Alès, noho ny ady nisy tany amin’ity firenena ity.
mardi, 21 mai 2019 15:19
Indonezia : Voafidy fanindroany ho filoha i Joko Widodo
55,5% ny vato manankery no azon’i Joko Widodo na "Jokowi" araka ny fiantson’ny olona azy, nanoloana an’ilay jeneraly misotro ronono Prabowo Subianto mpifaninana taminy, izay nahazo 44,50% araka ny nambaran’ny vaomieram-pifidianana any an-toerana. 57 taona izao i Jokowi. Tamin’ny 2014 izy no voafidy voalohany hitondra an’i Indonezia, rehefa nahazo isam-bato 53,15%.